Ukuncishiswa kobukhulu be-Ultrasonic kwe-Ink (isib. Nge-Inkjet) - Hielscher Ultrasound Technology
I-cavitation ye-Ultrasonic iyindlela ephumelelayo yokuhlakaza nokukhipha imithi (ukugaya okumanzi) kwezingulube zeyinki. Lolu buchwepheshe lungasetshenziselwa i-UV-, amanzi noma i-inject encry inks.
I-Ultrasound isebenza kakhulu ekunciphiseni kosayizi kwezinhlayiya zobubanzi ezisuka ku-500µm ziye ezilinganisweni. I-10nm. Igrafu engakwesokudla ikhombisa isibonelo sokwenza i-inkjet inks (ijika langakwesokudla: ngaphambi kwe-sonication, ijika lesobunxele: ngemuva kwe-sonication).
Lawula Ngaphezu Kwezingqinamba Zezinqubo kanye Nemiphumela
Ubukhulu bezinhlayiyana kanye nokusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ze-ink pigments kuthinta izici eziningi zomkhiqizo, ezifana nokugcoba amandla noma ikhwalithi yokunyathelisa. Uma kuziwa ekunyatheliseni kwe-inkjet inani elincane lezinhlayiya ezinkulu kungabangela ukungahleleki kokusabalalisa, ukuguqulwa kwamanzi noma ukuhluleka kwe-inkjet ibhuloho. Ngenxa yalesi sizathu kubalulekile ukuba ikhwalithi yeyinki ye-inkjet ibe nokulawula okuhle ngenqubo yokunciphisa usayizi esetshenziselwa ukukhiqizwa.
Ama-Hielscher ama-reactors e-ultrasonic asetshenziswa kakhulu kulayini. Uyinkinket we-inkjet uphonswe esitsheni se-reactor. Lapho, kuvezwa i-ultrasonic cavitation ngamandla amakhulu alawulwayo. Isikhathi sokuvezwa singumphumela wevolumu yokuphendula kanye nezinga lokuphakelwa kwezinto ezibonakalayo. I-inline sonication iqeda ukudlula ngoba zonke izinhlayiya zidlula egumbini lokuphendula ngemuva kwendlela echaziwe. Njengoba zonke izinhlayiya zivezwa kumapharamitha afanayo we-sonication ngasikhathi sinye phakathi komjikelezo ngamunye, i-ultrasonication imvamisa ijika ijika lokusabalalisa kunokuba likhulise. Ngokuvamile, “ukukhishwa kwesokudla” ayikwazi ukubonwa kuma-sampuli asondisiwe.
Ezimoto ezibhekene nokushisa, i-Hielscher inikeza i-jacketed flow flow reactors kuwo wonke ama-laboratory namadivayisi ezimboni. Ngokupholisa izindonga zangaphakathi zemijondolo, ukushisa kwenqubo kungasakaza ngokuphumelelayo.
Izithombe ezansi ngezansi zibonisa ukuthi i-carbon black pigment yahlakazeka ku-UV inkinobho. Sicela uchofoze ezithombeni zombono omkhulu.
I-Hielscher yenza amadivaysi e-ultrasonic ekusetshenzisweni kwama-inks noma yiliphi ivolumu. Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory isetshenziselwa amanani amaningi kusuka ku-1.5mL kuya ku-approx. 2L. Amadivayisi we-Industrial Ultrasonic asetshenziswa ekwenziweni kwenqubo nokukhiqizwa kwebatch kusuka ku-0,5 kuye ku-2000L noma kugeleza amanani ukusuka ku-0,1L kuya ku-20m³ ngehora. Ngokuhlukile kunobunye ubuchwepheshe bokuhlakaza kanye bokugaya, i-ultrasonication ingaba senziwe kalula. Ukuhlolwa kwelabhuthi kuzovumela ukukhetha usayizi wezinto ezidingekayo ngokunembile. Ithebula elingezansi libonisa izincomo zedivayisi jikelele ngokuya ngevolumu ye-batch noma izinga lokugeleza okufanele licutshungulwe.
An reactor ultrasonic siqukethe i-reactor isitsha kanye ultrasonic i-sonotrode. Le yodwa ingxenye, okumele igugu futhi ingashintshwa kalula ngaphakathi kwamaminithi. Amaplangipi okugcoba-oscillation avumela ukufaka i-sonotrode zibe izitshalo ezivulekile noma ezivaliwe ezicindezelayo noma amaseli okugeleza kunoma yikuphi ukuma. Awekho okudingekayo okudingekayo. Ama-reactor cell asegeleza ngokuvamile akhiwe ngensimbi engagqwali futhi abe nama geometri alula futhi angakwazi kalula kalula futhi usuliwe. Awekho ama-orifice amancane noma amacembe abufihliwe.
Umthamo we-ultrasonic osetshenziselwa ukuhlakazeka kwezicelo ukhulu kakhulu kunokuba kuhlanzwe ukuhlanzwa kwe-ultrasonic. Ngakho-ke amandla e-ultrasonic angasetshenziswa basize ukuhlanza ngesikhathi sokuhlanza nokuhlanza, njenge-ultrasonic cavitation ususa izinhlayiya kanye nezinsalela zamanzi ezivela ku-sonotrode nasezindongeni ze-flow cell.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokucubungulwa kwama-inks kanye nama-pigments usebenzisa i-ultrasonication. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic ukuhlangabezana nezidingo zakho.